Amashishini akwi-Intanethi kufuneka aThengise ukuThengisa ukuze aHlelele phambili Martech Zone
Amashishini akwi-Intanethi kufuneka aThengise ukuThengisa ukuze aHlelele phambili
Akukho mbuzo wokuba i-Intanethi itshintshe kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye kuyinyani kwindlela iinkampani ezithengisa ngayo ishishini labo kwi-Intanethi. Nawuphi na umnini-shishini ufuna ukujonga kuphela inani lotshintsho u-Google alwenzileyo kwi-algorithm yokukhangela ukuze afumane ukuqonda okuyisiseko malunga nendlela ezitshintshe ngayo iindlela zokuthengisa kwi-Intanethi ngokuhamba kwexesha.
Iifemu ezenza ishishini kwi-Intanethi kufuneka zenze iqhinga lokuthengisa rhoqo xa kukho utshintsho kwi-algorithms yokukhangela, okanye zinokushiyeka emva ukuya kuthi ga apho ukuthengisa kwabo kusokola khona. UBob Holtzman we Mainebiz.com kubeka ngokucacileyo:
"I-Intanethi iguquka ngokukhawuleza kangangokuba into ebisebenza kunyaka ophelileyo inokuba sele iphelelwe lixesha- kwaye inokuchaza intengiso kwi-Intanethi kule minyaka ilishumi idlulileyo. Kanye xa ezinye iinkampani zazakha iiwebhusayithi zazo zokuqala, amajelo eendaba ezentlalo aqala ukubamba ii-eyeballs kunye nokwenza ukuba ezo ndawo zingasemva kwejika zibonakale ngathi zezakudala okanye zingabalulekanga.
“Abafika emva kwexesha kuFacebook bazifumana sele behambile kwitheko likaTwitter, nabo. Ngelixa ezinye iiwebhusayithi ziqala ukudibanisa imithombo yeendaba zentlalo, izixhobo eziphathwayo bezinyanzelisa utshintsho olukhulu kuyilo lwesiza, uyilo kunye nomxholo. ”
Uhlengahlengiso lwamva nje
Okwangoku, amashishini akwi-Intanethi ayasabela kutshintsho olwenzekileyo ngenxa yohlaziyo lukaGoogle lwamva nje, olubizwa ngokuba yiHummingbird. Injongo yolu tshintsho lwealgorithm yayikukutshintsha kobunzima ukusuka kukhangelo lwamagama aphambili ukuya kukhangelo lwencoko efuna iimpendulo kwimibuzo ethe ngqo.
UGoogle utshilo ukuba ufuna ukukhuthaza umxholo (iiwebhusayithi) ezikwaziyo ukuphendula imibuzo yabasebenzisi, ke umxholo wakho awunakuba malunga nokukhuthaza umgca wemveliso okanye uphawu. Kufuneka ibe yinto eboniswa njengexabisekileyo kuqala. Nje ukuba esi siseko sakhiwe, iindlela zokuthengisa zinokusetyenziselwa ukujikeleza indawo yakho ngaphandle kokugqitha kakhulu.
Thatha eli phepha kwi Iziciko zikaCleveland umzekelo. Umxholo ophambili wephepha ufundeka ngolu hlobo: Ngaba unayo iifestile zebay? Ngaba ufuna isisombululo esisebenzayo? Kwangoko kwilulwane, inkampani ibonisa ukuba ijongana nomba ababukeli abanokuba nawo.
Ngoku into eyenza eli phepha lahluke kukuba inkampani ayiyanga kudonga olukhulu lokubhaliweyo ukuchaza into enokwenziwa ngumntu ngewindow ye-bay; ibonise undwendwe uthotho lwemifanekiso eqaqambisa izisombululo kwingxaki. Umntu onokuza efuna impendulo angayifumani kuphela, kodwa unokubona ukuba iimveliso zikaCleveland Shutters zisisisombululo njani ngaphandle kokubethwa yintengiso yesiko.
Impembelelo ekhulayo yeselfowuni
Iingcali zikwatsho ukuba inani elikhulayo lokuhamba ngokuqinisekileyo liya kuba nefuthe elikhulu kwintengiso kwikamva. "Ingongoma apho uphando oluninzi olwenziwa khona kwizixhobo eziphathwayo kuneekhompyuter ezizayo luza ngokukhawuleza kunokuba abaninzi becinga," utshilo uNjineli woPhando lukaGoogle uMatt Cutts. "Andinakothuka ukuba kungekudala siza kuthatha isantya sephepha elihambahamba sithathela ingqalelo i-SEO."
Ngenxa yoko, uhlahlo-lwabiwo mali lujolise amalinge okuthengisa ahambayo inyuke nge-142 yeepesenti phakathi ko-2011 no-2013. Oku kuninzi okuqala ngohlobo olusebenziseka lula lwesiza senkampani, nesoloko ingahoywa ngamashishini akwi-Intanethi.
“Abatyibilili beeWebhsayithi ezihamba neselfowuni liqela elinzima. Ukuba bayandwendwela iwebhusayithi yakho kwaye ayilungiswanga kuzo zombini izixhobo abazisebenzisayo kunye neendlela ezahlukeneyo abaziphatha ngayo abasebenzisi, baya kukhathazeka kwaye bahambe, utshilo uKen Barber, usekela mongameli wentengiso ku-mShopper.com.
Ngelixa iintsingiselo ziya kutshintsha ngokuqinisekileyo, inye into uGoogle angazange waphambuka kuyo kukubaluleka kwamava omsebenzisi asemgangathweni njengeyona nto ibaluleke kakhulu ekumeni kwamaphepha okukhangela iziphumo. Ukubonelela ngesiqulatho esinexabiso kunye nokubonelela ngeendwendwe, zombini nge-desktop kunye neselfowuni, ngamava atyebileyo, anomdla kuzo zombini iindlela ezingaze ziphume ngesitayile.
Imbali ye #Hashtags
5 Isoftware njengeSivumelwano seKhontrakthi yeNkonzo ekufuneka siyiphephe